Ungaluthelekisa njani utshintsho kwifayile ye-CAD-iGeofumadas
NgoJuni, 2017 cadastre, Microstation-Bentley
Isidingo esixhaphakileyo kukukwazi ukwazi utshintsho olwenzekileyo kwimephu okanye kwisicwangciso, ngokuthelekisa njengoko kwakunjalo ngaphambi kokuhlelwa okanye njengomsebenzi wexesha, kwiifayile ze-CAD ezinje nge-DXF, i-DGN kunye ne-DWG. Ifayile ye-DGN yifomathi kaMicrostation kunye nefomathi yendalo. Ngokuchasene nokwenzekayo nge-DWG etshintsha ifomathi yayo rhoqo kwiminyaka emithathu, kwi-DGN zimbini kuphela iifomathi: i-DGN V7 eyayikho kwiinguqulelo ezingama-32 ukuya kuthi ga kwiMicrostation J kunye ne-DGN V8 esele ikho ukusukela kwiMicrostation V8 kwaye iya kuhlala isebenza iminyaka emininzi .
Kule meko siza kubona indlela yokwenza ngayo usebenzisa i-Microstation.
1 Yazi utshintsho lomlando lwefayili ye-CAD
Oku kusebenza kwamkelwa kwimeko yeHonduras Cadastre, emva ngo-2004, xa ukhetho lokuya kwindawo yogcino lwendawo lwalungeyonto esondeleyo. Ngenxa yoku, kwagqitywa kwelokuba kusetyenziswe uhlobo lwembali lweMicrostation, ukugcina uguquko ngalunye olwenziwe kwimephu.
Yiyo loo nto kangangeminyaka eli-10 iifayile zeCAD zigcina intengiselwano yoku-odola nganye, yaguqulelwa njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso ulandelayo. Inkqubo igcina inombolo yenguqulo, umhla, umsebenzisi, kunye nenkcazo yenguqu; Ukusebenza okucocekileyo okuqhelekileyo kweMicrostation esele inenguqulelo yayo ye-V8 2004. Ukudityaniswa yayikukunyanzela nge-VBA eyanyanzela ukwenziwa kwenguqulelo xa kuvulwa ulondolozo kwaye nasemva kwentengiselwano. Ulawulo lwefayile lwenziwe kusetyenziswa iProjekthiWise, ukuthintela abasebenzisi ababini ukuba bangasebenzisi ngexesha elinye.
Nokuba yeyiphi na inkqubo eyindala, ifayile ngaphandle kwembali ivuliwe ukuba ibone utshintsho ngemibala; Imephu esekhohlo yinguqulelo etshintshiweyo, kodwa xa ukhetha intengiselwano ungabona ngemibala into esusiweyo (ipropathi ka-2015), yintoni entsha (iipropathi ezingama-433,435,436) kwaye kuluhlaza okwaguqulwa kodwa kungafuduswanga. Nangona imibala ihlengahlengiswa, into ebalulekileyo kukuba utshintsho lunxulunyaniswa nentengiselwano kwimbali enokubuyiselwa umva.
Jonga ukuba zingaphi iinguqu kule mephu. Ngokogcino lwembali, ugcino lwe-127 elithe lasokola eli candelo lubonisa indlela le ndlela eyabelwa ngayo kwaye yaqhubeka, ngaphezulu kwayo yonke into endinayo kukubona abasebenzisi ekwakumnandi kubo ukubona umdlalo weqela lesizwe: USandra, Wilson, Josué , Rossy, the Kid ... onako ukwenza kwaye ndikhale. 😉
Nangona yasenza sahleka xa ngo-2013 sithathe isigqibo sokufudukela kwi-Oracle Spatial, kwaye sayibona njengokusebenza kwamandulo; Khange siyamkele, endiyiqinisekisile kumazwe anemeko enye apho kuye kwagqitywa ukuba kugcinwe iifayile ezahlukileyo kutshintsho ngalunye okanye imbali ayigcinwanga. Umceli mngeni omtsha yayikukucinga ngendlela yokufumana kwakhona nge-VBA lembali inxulumene nokuthengiselana kwaye yaguqulwa yenziwa izinto eziguqulweyo kwiziko ledatha lendawo.
2 Ukuthelekiswa kweefayile ezimbini ze-CAD
Ngoku cinga ukuba ulawulo lwembali alugcinwanga, kwaye into oyifunayo kukuthelekisa uhlobo lwakudala lwesicwangciso se-cadastral ngokuchasene nesilungisiweyo kwiminyaka emininzi kamva. Okanye izicwangciso ezimbini eziguqulwe ngabasebenzisi abohlukeneyo, ngokwahlukeneyo.
Ukwenza oku, abahlobo kwelinye icala lomda bandinike isixhobo esiluncedo kakhulu esibizwa ngokuba yi-dgnCompare, endothusileyo. Zimbini kuphela iifayile ezibiziweyo, kwaye iqhuba uthelekiso phakathi kwezinto ezimbini eziyinyani.
Ayisiyiyo kuphela ifayile enokuthelekiswa nenye, kodwa ngokuchaseneyo; ivelisa iingxelo kunye nokuboniswa kwemizobo yezinto ezongeziweyo, ezisusiweyo, kubandakanya nezo zinokulungiswa okuncinci njengombala okanye ubukhulu bomgca. Ngokuqinisekileyo uthelekiso olwenziwayo luya kuthatha iiyure, ukuba azikho iintsuku kuxhomekeke kwinani lotshintsho. Kuxhomekeke kwisicelo sobunjineli osebenza kuso kunye nexesha elingagcinwa, i-dgnCompare iluncedo lokwenene lokwenza lo msebenzi kwimizuzu nje embalwa.
Ukuba umntu unomdla ekuboneni umboniso wendlela yokuguquka kwezenzo nendlela yokufumana ngayo, shiya yakho kwifom elandelayo uchwepheshe uya kuqhagamshelana nawe.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IArcGIS-Incwadi yemifanekiso
Post Next Amanyathelo ukwenza imephu usebenzisa dronesOkulandelayo »